MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 932
>27th DEC 2009 - MoeMaKa Radio
>Senior Burmese Writers &amp; Artists in exile showed their solidarity with Free Burma activity
>မိုးမခ (ရန်ကုန်) -ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ
>Music Video honoring unknown heros of Burma on YouTube
> အသုဘရှု ဖိတ်ကြားလွှာ မန္တလေးမြို့၊ ၃၂ လမ်း၊ ဂုန္တန်ဆေးရိုးဝင်းနေ (ဦးထင်) + (ဒေါ်စု) တို့၏ သမီး၊ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပုစွန်မြောင်းကျေးရွာနေ (ဦးပု) + (ဒေါ်ခိုင်) တို့၏ သမီးချွေးမ(နဂါးဦးထွန်းချွန်)...
> လူထု ဒေါ်အမာ ကွယ်လွန်ပြီမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဧပြီ ၆၊ ၂၀၀၈ ဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ (၉၃) နှစ် သည် မြန်မာစံတော်ချိန် ၇ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီ...
> သာသနမောဠိအဖြဲႚခဵပ်ြကူမန်မိာံစ်ြသစ်အတကြ် အထူိးိုံးဆော်ခဵက်ထုတ်ူပန်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဧူပီ ၆၊ ၂၀၀၈ ယခင်လက ဦးဆောင်ဆရာတော်ုကီးမဵား မေတ္ဇာရပ်ခံခဵက်မဵားကို ထပ်လောင်းသည့်အနေိံငြ့်၎င်း ယခုမန်မိာံစ်ြကူးကာလတငြ်ူပည်တငြ်ူးပည်ပရြိူမန်မာမဵာိးံငြ့်ူမန်မာ့အရေးလပ်ြရြားမမြဵား အရြိန်အဟုန်ူမင့်ုကရန် ထုတ်ူပန်ေုကညာလိုက်သည်။...
>အခြေခံဥပဒေမူုကမ်းနဲႚ အမျြိးသားညီလာခံမူတိုႚ ကွဲလွဲချက်များ –ုကည့်လုပ်ုကပါအုံး
> အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ အမျုိးသားညီလာခံမူတို့ ကွဲလွဲချက်များ – ကြည့်လုပ်ကြပါအုံးစာဖတ်သူတဦး (ရန်ကုန်)ဧပြီ ၆၊ ၂၀၀၈ ၁။ (က) အမျိုးသားညီလာခံ၏ အခြေခံရမည့်မူများစာအုပ် စာမျက်နှာ (၂၂၃)၊ အခန်း(၁၂)၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းအခန်း၊ အပိုဒ်-၄...
>လူႚအခငြ့်အရေး တန်ဖိုးမထားသူ တရုတ်ူပည်က အိုလံပစ်ပြဲတော်ကို အူမတ်မထုတ်ရန်
> လူႚအခငြ့်အရေး တန်ဖိုးမထားသူ တရုတ်ူပည်ကအိုလံပစ်ပြဲတော်ကို အူမတ်မထုတ်ရန်ကိုလိုရာဒိုကိုံင်ငံစုံပည်သူတိုႚ တောင်းဆိုကမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဧူပီ ၅၊ ၂၀၀၈ ကိုလိုရာဒိုးပည်နယ်၊ ဒင်းဗာူးမြိႚရြိ အမေရိကန်ိုံင်ငံသားမဵာိးံငြ့်အတူ မိခင်ိုံင်ငံမဵားမြိုံင်ငံရေးဒုက္ခမဵားေုကာင့်ေူပာင်းရြေႚလာရသူ တရုတ်...
>၇ရက်အတငြ်း သုံးဦးေူမာက် ရိုက်ိံက်ြခံရသူ
> ၇ရက်အတငြ်း သုံးဦးေူမာက် ရိုက်ိံက်ြခံရသူဓာတ်ပုံသတင်းဧူပီ ၅၊ ၂၀၀၈ ဧူပီလ ၄ ရက်နေႚက ရိုက်ိံက်ြခံရပုံကို ရငြ်ူးပနေသော ဦးတင်ယု။ အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵပ်ြမြ အဖြဲႛ၀င်မဵား ယခုရက်ပိုင်းအတငြ်း ရိုက်ိံက်ြခံရလက်ရိရြာ ဦးတင်ယုသည် ၇ရက်အတငြ်း သုံးဦးေူမာက်...
>Weekly eleven ဂဵာနယ် ရေလိုနေတယ်
> မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစများ – Weekly eleven ဂျာနယ် ရေလိုနေတယ်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဧပြီ ၅၊ ၂၀၀၈ ဧပြီ ၂ ရက်နေ့ထုတ် Weekly eleven ဂျာနယ် ဒီဂျာနယ်မှာ ၀န်ထမ်းအယောင်ဆောင်ပြီး ငွေတောင်းသူကို...
>Vote "No" Movement in Mandalay and7arrest for NO protest
>To Be or Not To Be, t’isaQuestion
> To Be or Not To Be, t’isaQuestion …လူဖစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ ကာတနြ်း – ဘိရုမာ ဧူပီ ၄၊ ၂၀၀၈ No...
> စစ်အစိုးရဆိံ္ဋခံယူပြဲအတကြ် အဲန်အယ်ဒီပၝတီက ကန်ႚကကြ်ေုကာင်း အသေးစိတ်ထုတ်ူပန် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဧူပီ ၄၊ ၂၀၀၈ ဧူပီလ ၂ ရက်နေႚစြဲူဖင့် ၁၉၉၀ ရြေးကောက်ပြဲအိုံင်ရပၝတီ အဲင်အယ်ဒီကေုကညာခဵက်မဵားထုတ်ူပန်ရာတငြ်ိုံင်ငံသားမဵား ဆိံ္ဋမဲပေးပိုင်ခငြ့်ရရြ်ိရေး၊...
>ဗမာခေတ်မသြည်ေုကးမုံ၊ေုကးမုံမသြည် ခေတ်ူပိင်ြနဲႚ မိုးမခဆီသိုႚႛ
> ၀မ်းနည်းမတ်ြတမ်း –ေုကးမုံဦးသောင်း (အောင်ဗလ) ၈၂ိံစ်ြဗမာခေတ်မသြည်ေုကးမုံ၊ေုကးမုံမသြည် ခေတ်ူပိင်ြနဲႚ မိုးမခဆီသိုႚႛမောင်ရစ်ဧူပီ ၄၊ ၂၀၀၈ူမန်မာူပည်ရဲႚ သံမဏိသက်ရညြ် သတင်းစာဆရာုကီး၊ူမန်မာူပည် အာဏာရင်ြခေတ်အဆက်ဆက်၏ မတရားမမြဵားကို...
> ရေဝြၝရောင် စက်တင်ဘာ တေးဂီတအဖြဲႛ“မဲရုံဆီသိုႚ ကန်ႚကက်ြစိုႚ” အတာတေးသီခဵင်း ၂ ပုဒ်ူဖန်ႚခဵိမိုးမခဧူပီ ၄၊ ၂၀၀၈ူမန်မာူပည်တငြ်းက ဂီတအိုံပညာရင်ြမဵားရဲႚ ရေဝြၝရောင် စက်တင်ဘာ တေးဂီတအဖြဲႚက ဒုတိယေူခလမြ်းအူဖစ် “မဲရုံဆီသိုႚ ကန်ႚကက်ြစိုႚ”...
>စကဿာပူ ၂၀၀၈ သုကဿန်ပြဲအတကြ် အမတ်ြတရထုတ်တဲ့ ပိုစတာ
>စကဿာပူ ၂၀၀၈ သုကဿန်ပြဲအတကြ် အမတ်ြတရထုတ်တဲ့ ပိုစတာ လမြနြ်(မုံရြာ)ဧူပီ ၃၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
> စေ့စပ်ဆြေးြေိံးပြဲ နဲႛ စကားေူပာပြဲရဲဘော်ဖိုးသံခေဵာင်းဧူပီ ၃၊ ၂၀၀၈ ဒီနေႛဗမာူပည်မြာ ဖေဖော်ဝၝရီလထဲမြာ ထုတ်ူပန်လိုက်တဲ့ ၁/၂၀၀၈နဲႛ ၂/၂၀၀၈တိုႛရဲႛဂယက်တြေ အူပင်းအထန်ရိုက်ခတ်နေ ပၝတယ်။ အဲဒၝကတော့ နအဖစစ်အစိုးရဟာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်နဲႛ “စကားေူပာ” နေတဲ့အုကားက သူတိုႛရဲႛဖြဲႛစည်းအုပ်ခဵပ်ြပုံဥပဒေ...
> မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစများ – တိဘက်လွတ်မြောက်နယ်မြေ၊ လုပ်ကြံသူများ ဂုဏ်ပြုခံရအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဧပြီ ၃၊ ၂၀၀၈ တိဘက်လွတ်မြောက်နယ်မြေ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ KIA က တရုပ်နိုင်ငံဘက်ကို လွဲပြောင်း ပေးပို့လိုက်သူနှစ်ဦးဟာ တိဘက်ဒေသအရေး လှုပ်ရှားသူတွေ...
>ူပည်သူဆိံ္ဋခံယူပြဲ မတိုင်မီ အမဵြိးသားရေးတက်ုကသြူမဵားကို စစ်အစိုးရက ပိုက်စိတ်တိုက်ဖမ်းဆီးမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဧူပီ ၃၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ ခိုံစ်ြအတငြ်းမြာပင်ိုံင်ငံရေိးံငြ့်ပတ်သက်ူပီး လပ်ြရြားတက်ုကသြူမဵားကို စစ်အစိုးရက နည်းအမဵြိးမဵြိူးဖင့် အမဆြင်ဖမ်းဆီူးခင်း၊ နေအိမ်မဵားတငြ် မနေရဲအောင်...
> အဲန်အယ်ဒီပၝတီကလည်း ကန်ႚကက်ြမဲ ပေးမည်ဘီဘီစီ (ဧ္ဘပီလ ၂ ရက် ၂၀၀၈) ညပိုင်း ကောက်ိုံတ်ခဵက်ဧူပီ ၂၊ ၂၀၀၈ အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵပ်ြက ဒီကနေႛမြာပဲူပည်သူသိုႛ ပန်ုကားခဵက်ဆိုတာကို ထုတ်ူပန်ခဲ့ ပၝတယ်။ ဒီပန်ုကားခဵက်ထဲမြာ...
> အိုံပညာရင်ြဟန်လေး၏ ပန်းခဵီကားဓာတ်ပုံသတင်းဧူပီ ၂၊ ၂၀၀၈ ခဵင်းမိုင်ူမြိႛ “သုံိးုိံင်ငံ ပန်းခဵီူပပြဲ“ မြူမန်မာူပည်သား ပန်းခဵီဆရာ၊ ကာတနြ်းဆရာ ဟန်လေး၏ လက်ရာတစ်ခုဖစ်သည်။ Bring Home ဟု အမည်ပေးထားသော ဤဆီဆေးပန်းခဵီကားကို...
>To Play or Not To Play, tisaQuestion …
> To Play or Not To Play, tisaQuestion … April 2, 2008 No tags for this post....
>သီးလေးသီးနဲႚဆေးရောင်စုံ ၂ိုံင်ငံ ခြဲူပီး သုကဿန်ပြဲ ကုကမည်
> သီးလေးသီးနဲႚဆေးရောင်စုံ ၂ိုံင်ငံ ခြဲူပီး သုကဿန်ပြဲ ကုကမည်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဧူပီ ၁၊ ၂၀၀၈ ယခု လတ်တလောုကားရတဲ့ သတင်းအရ သီးလေးသီးနဲႚ ဆေးရောင်စုံအူငိမ့်အဖြဲႚဟာ ထိုင်းနဲႚ စကဿာပူမြာ...
>ူမန်မာနည်ူးမန်မာဟန်နဲႚူမန်မာအိုင်စီတီဓာတ်ပုံသတင်းဧူပီ ၁၊ ၂၀၀၈ူမန်မာအိုင်စီတီူပပြဲုကီး ရန်ကုန်မြာ ကဵင်းပပၝတယ်။ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ ကန်ြပဵတြာကိရိယာတေကြို ခင်းကဵင်းတင်ဆက်ထားတဲု့ကားမြာူမန်မာူပည်ရဲႚ ပြဲတိုင်းကေဵာ် မပၝမူပီး ကန်တော့ပြဲ – “အုန်းပြဲ...
> အမဵြိးသားကဗဵာစာဆို ဇော်ဂဵီ ရာူပည့်စာုကည့်တိုက်ဖငြ့်ပြဲ ကဵင်းပမည်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဧူပီ ၁၊ ၂၀၀၈ ဧူပီလ ၅ ရက်တငြ် ဆရာဇော်ဂဵီအထိမ်းအမတြ် ရာူပည့်စာုကည့်တိုက်ဖငြ့်ပြဲ ကဵင်းပမည်ူဖစ်သည်။ ဆရာဦးသော်ကောင်း၊ တက္ကသိုလ်တင်မနြ်၊ ဖေူမင့်၊...
>မိုးမခ ၀င်း – စစ်အစိုးရ၏ိုံင်ငံရေးမဲ့ လညြ့်ကက်ြမဵား
> စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးမဲ့ လှည့်ကွက်များမိုးမခ ၀င်းဧပြီ ၁၊ ၂၀၀၈ “အခြေခံဥပဒေအတည်ပြုပွဲ”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲကို မေလမှာကျင်းပတော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုက “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုပွဲ” ဆိုတော့ ကန့်ကွက်ချင်သူတွေအတွက် နေရာမရှိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ စစ်အစိုးရ...
>လူထုဒေၞအမာ – ဂီတမယ် လကြလေးစိန်
> ဂီတမယ် လကြလေးစိန်လူထုဒေၞအမာဧူပီ ၁၊ ၂၀၀၈ အူငိမ့်မင်းသမီးထဲမြာ အရိုးအသားအနိုင်ဆုံး မင်းသမီးကိုပပၝဆိုရင် ဂီတမယ် လကြလေးစိန်ကိုပရပၝလိမ့်မယ်။ အူငိမ့် ကခဲ့ပၝတယ်၊ ကတာမြ အသက် ၉နစြ် အရယ်ြက အသက်...
Page 932 of 952«1...930931932933934...952»